Kyaw Nyo Thway: နိုင်တီးဂွမ်တီးက ဆယ်လ်ဖီ (သို့) 1920 က Selfie
နိုင်တီးဂွမ်တီးက ဆယ်လ်ဖီ (သို့) 1920 က Selfie
အရမ်းရှေးကျတာကို နိုင်တီးဂွမ်တီး လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ။ အခုမြင်ရတဲ့ပုံကတော့နိုင်တီးဂွမ်တီးကဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့
Byron Company က ထူထောင်ထားတဲ့ Marceau’s Studio ရဲ့ အမြင့်တနေရာမှာ ချိတ်ဆွဲဖို့အတွက် ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ဓါတ်ပုံဆရာတွေက အတူတွဲပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ကြတဲ့ Selfie ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံ ၂ ပုံ ကို အခုတော့ New York Museum မှာ ပြသထားပါတယ်။ တစ်ပုံကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးပြီး ရလာတဲ့ Selfie ဖြစ်ပြီးတော့ ၊ နောက်တစ်ပုံကတော့ အဲဒီလို Selfie ရိုက်ကူးနေကြပုံကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Selfie ရိုက်ကူးကြတာဘယ်တုန်းကစပြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ကတော့ မသေချာပေမယ့်လည်း သေချာတာကတော့ အရင့်အရင်နှစ်တွေထဲက Selfie ရိုက်ကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်
သလောက်တော့ ၁၉၂၀ ခုနှစ်များထဲမှာ ခေတ်စားခဲ့တယ်ဆိုတာ
ဖော်ပြပါ ဓါတ်ပုံနှစ်ပုံကလည်း 1920 ခုနှစ်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ ပြောရရင် ယနေ့ Modern Selfie တွေရဲ့ ရှေ့ဆောင်ပုံတစ်ပုံလို့လည်း ပြောလို့ရနိုင်မယ်လို့ အထောက်အထား အချက်အလက်များအရ သိရပါတယ်။ ၁၉၂၀ မတိုင်ခင် ၁၉၀၇ ခုနှစ်တုန်းက ရှေးကျတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးရိုက်ကူးတဲ့ Selfie တစ်ပုံကို
တွေ့ရပေမယ့်လည်း ကင်မရာရဲ့ မျက်နှာဝကို ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်လှည့်ပြီး လက်ကိုဆန့်တန်းလို့ ရိုက်ကူးတာမျိုးတော့ အတိအကျမတွေ့ရပါဘူး။
နောက်ထပ် ကျော်ကြားတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကတော့ 1939 ခုနှစ် မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Robert Cornelius ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးတော့ The first light Picture ever taken ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံနောက်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ မှတ်တမ်းတွေမှာတော့ 1839 ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၊ နိုဝင်ဘာ မသေချာတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ဓါတ်ပုံပညာရှင် Robert Cornelius ဆိုသူဟာ သူ့ရဲ့ ကင်မရာကို သူ့အဖေဖြစ်သူရဲ့ ဆိုင်အနောက်ဘက်မှာ ထောင်ပြီး Self-Portrait ပုံတစ်ပုံရဖို့ ငါးမိနစ်လောက်ငြိမ်ငြိမ်ရပ်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြကြတယ်။ အဲဒီပုံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Cornelius က သူ့ဓါတ်ပုံအနောက်မှာ The first light Picture ever taken. 1839. လို့ ရေးသားဖော်ပြထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ (အောက်ပုံ)
သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ Robert Cornelius ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေးအကျဆုံး ကိုယ်တိုင်ရိုက် Portrait ပုံတစ်ပုံဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ကင်မရာကိုကိုင်ပြီး ရိုက်ကူးတဲ့ Selfie တစ်ပုံတော့မဟုတ်ခဲ့တာကြောင့် အငြင်းပွားစရာအနည်းငယ်တော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူဟာ Self-Portait ရိုက်ကူးမှုမှာတော့ ပထမဆုံးတီထွင်ဖန်တီးမှုပြုလုပ်သူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံထားရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၁၉၂၀ ခုနှစ်များရဲ့ အလယ်ခေတ်ထဲမှာ တချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ ကင်မရာကိုကိုင်ပြီး မှန်ထဲက ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတဲ့ Selfie များရှိပေမယ့်လည်း ကင်မရာကိုင်ပြီး ကင်မရာမှန်ဘီလူးရှိတဲ့မျက်နှာဝကို ကိုယ့်ဘက်ကို ပြန်လှည့်လို့ လက်ကိုရှေ့ကိုဆန့်တန်းကာ ရိုက်ကူးတဲ့ Arm's-length selfie ပုံကတော့ အရှေ့မှာ အဲဒီလိုပုံမျိုး ရှာမတွေ့နိုင်သေး တာကြောင့် Merceau’s Studio က ဓါတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံဟာ ရှေးအကျဆုံး Selfie ပုံလို့ ဆိုကောင်း ဆိုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
- ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ Selfie လို့ ခေါ်တဲ့ စကားလုံးတစ်ခုကို World of the year အဖြစ် Oxford English Dictionary မှာထည့်သွင်းဖော်ပြဖို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Selfie ရဲ့ မူလရင်းမြစ်ကတော့ Australian ဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
- Selfie ဆိုတာကတော့ Self-Portrait Photograph ဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအနေနဲ့တော့ လက်တစ်ဘက်ကနေ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာသို့ ဖုန်းကင်မရာကို ကိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတဲ့ ဓါတ်ပုံကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Sources – http://www.fastcodesign.com http://americanhistory.si.edu
(ဖော်ပြပါ စာသားများကို တစ်ပုဒ်လုံးဖြစ်စေ ၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြုပါ။ ကူးယူဖော်ပြလိုပါက Kyaw Nyo Tway Facebook Page ကို Message ပေးပို့၍ အသိပေးစေလိုပါသည်။)
Kyaw Nyo Thway: နိုင်တီးဂွမ်တီးက ဆယ်လ်ဖီ (သို့) 1920 က Selfie - နိုင်တီးဂွမ်တီးက ဆယ်လ်ဖီ (သို့) 1920 က Selfie
Tuesday, January 26, 2016 at 12:56 AM